Milicsiga Waxyeelladii Wasaaradda Duulista Hawada iyo Gaadiidka Cirka Somaliland! Qaybta 4aad | Ramaas News
Iyada oo uu socdo boobkii lagu hayay dhulka Madaarku, waxa ayaan-darro ah in la dumiyo deyrkii xabaalaha ku yaallay afaafka Garoonka Cigaal, oo ku beegan albaabka dibadda ee albeerkada uu dhismaheedu socdo. Waxa qubuurihii meytida lagu daadiyay qashin sida laga arki karo muuqaallo lagu baahiyay baraha bulshada. Tolow iyagana miyaa la soo faqayaa si hudheelku wajahad wanaagsan u helo? Yaa ka dambeeya dayaca iyo duminta aan xabaalahaa aan garanayo qaar ka mid ah dadka ku aasan?
Illaa iyo hadda waxa taagan muran u dhexeeya dadkii lahaa dhulka hudheelka laga dhigayo iyo masuuliyiinta wasaaradda duulista oo hore dhulkan ula wareegay dan guud ahaan.
Qormadan waxa aynu ku eegi doonnaa doorkii wasaaradda duulista ee gacan-bidixaynta gegada Berbera: Saldhigga Imaaraadka la siiyay iyo baahida loo qabo gegadaa la sarriftay, yaa lagu naas-nuujiyay dhismaha dhabbaha madaarka Burco? halkee ayuu marayaa xeerkii haayadda duullimyaadyada madaniga ahi? maxaa ka fulay ballan-qaadkii Siilaanyo u sheegay dadka Koonfurta Hargeysa 2010ka? Sidee loo maamulay dhaqaalihii loo celin lahaa dadka dhulkooda laga qaaday?
Dhaxal-wareejintii Madaarka Berbera
Wasaaradda Duulistu waxa ay saxeexday heshiiskii dhaxal-wareejinta Gegada Diyaaradaha ee Berbera. Haddii uu si Alle ama dhibaato timaadda awgeed u shaqayn waayo Madaarka Cigaal (Hargeysa) halkee ayaa ay diyaaraduhu fadhiisanayaan? Miyaa uu jiraa garoon kale oo Somaliland u shaqaynayaa?. Heshiiskan waxa si jujuub ah 12kii Feb 2017ka looga ansixiyay Goleyaasha Baarlamaanka Somaliland. Mudanayaashii doonay in ay aragtidooda dhiibtaanna waxa lagu muquuqinay ciidan, car-juuq-dheh, cudud iyo qori caaradii. Wasaaraddu laba gego ayay gacanta ku haysay, haddana garoon madi ah oo dhutinaya ayaa dalkii u hadhay!
Aaway Haayaddii Duullimaadyada Madaniga Ahi?
Khudbad-sannadeedkii Madaxweyne Siilaanyo 28kii March 2015ka u jeediyay Goleyaasha Baarlamaanka, waxa uu kaga codsaday in la ansixiyo xeerar uu ka mid yahay Xeerka Haayadda Duulmiyaadyada Madaniga Ah oo inta aan ogahay Golaha Wakiillada hor yaallay tan iyo 2013kii. Waxa lagu unkayay guddi maamusha garoonnada Somaliland, waxaana dhaqaale $2 milyan doollar ah ku bixinayay Ingiriiska.
Guddoomiye Cirro ayaa dhawr jeer hoosta dhigay kaddib markii uu Wasiirkii Duulistu (Maxamuud Xaashi) kaalin weyn ka qaatay isku dayo lagu ridayay Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Somaliland sannadkii 2014ka. Si kasta oo ay tahayna Golaha Wakiilladu xeerkaas waa ay ansixiyeen iyada oo ay wax-ka-beddel ku sameeyeen. Tifaftirkaas waxa aan ku qancin nin Duulista joogay oo madaxtooyada eegga fadhiya. Mar labaad ayay madaxtooyadu Golaha Wakiillada ku soo celisay, iyaga oo raba in sidii ay u malluuqeen qalinka loogu duugo. Wasiir Caddaani ayaana sheegay in ay xeerkaas celiyeen, markii uu wakiilka ka ahaa Wasaaradda Duulista Hawada
Madaxda Wasaaradda Duulista Hawada waxa aan weydiin lahaa “Aaway Haayaddii Duulmiyaadyada Madaniga Ahi?”. Ma markii lacagta Ingiriisku ina dhaaftay ayaynu nacnay? Halkee ayaa ay xeerkaas iyo guddidii maamuli lahayd duullimaadyadu marayaan? Mise adigu warba kama haysid ee hawl nin wato oo uu la tegay ayay ahayd?
Naasnuusjinta Dhismaha Dhabbaha Madaarka Burco
Wakiillada Wasaaradda Duulista hadda jooga waxa lagu amray in uu shirkadda China-horn (Cabdirisaaq Cummaani) siiyo dhismaha dhabbaha Garoonka Burco, iyada oo aan qandaraaskan loo marin sifihii sharciga ahaa ee naadinta, tartanka, kala-xushada iyo guud ahaan hannaanka mashaariicda dawliga ah loo fulin jiray. Dhabar-taashada noocan ahi miyaanay naas-nuujin ahayn?
Maxaa Ka Fulay Ballan-qaadkii Siilaanyo Ee 2010ka
2010kii waxa uu Madaxweyne Siilaanyo u sheegay bulshada Koonfurta Hargeysa in uu siin doono kala badh saamiga shaqaalaha ee Madaarka Hargeysa, isaga oo rabay in ay codkooda siiyaan. Dadkuna intii karaankooda ah waa ay u codeeyeen..Xisbiga KULMIYE iyo xukuumaddiisu ma ay fulinnin ballanqaadkii Madaxweyne Siilaanyo ku galay ololihii doorashada 2010ka, kaas oo ahaa in dadka Maxamuud Haybe la siin doono 50% shaqaalaha Garoonka Cigaal ee magaalada Hargeysa.
Dadka deegaanka oo warramaya ayaa yidhi “Xilligii la ballaadhinayay dhulka Madaarka waxa la keenay khabiir Ingiriis ah, waxaanu ninkaasi ku taliyay in dadka deegaanka laga qayb-geliyo shaqaalaha si ay horumarka, nabadgelyada iyo shaqo-wanaagga madaarka kaalin uga qaatay. Xukuumaddu waxa ay sheegtay in ay soo-jeedintaas hoosta ka xarriiqaday oo ay fulin doonto.
Wasiir Maxamuud Xaashi Cabdi waxa uu qoys kasta oo dhulkiisa madaarku galay u ballan-qaaday in uu siin doono saddex qof oo shaqaale ah, “Marka ay dhammaan raggu ka hawl-galaan madaarka, xitaa dumarka ayaa shaqaale la qori doonaa” ayuu yidhi. Illaa haddana lama fulin axddiga ay dawladdu nala gashay.
Iyada oo uu gorgortan xagga dhulka iyo beddelkiisa ahi u socdo bulshada deegaanka iyo Wasaaradda Duulista ayaa ay xukuumaddu dhabarka soo taabatay guddi ka socda Koonfurta Hargeysa. Kuwaas waxa ay dantoodu ahayd in ay ka qayb galaan boobka dhulka hantida guud ah, waxaanay adhaxda ka jebiyeen aragtidii iyo wada-hadalkii u socday xukuumadda iyo dadka dhulkooda lagu fidiyay madaarka Hargeysa. Ugu dambayntiina waxa dadka loo ballan-qaaday in la siiyo dhul beddel u dhigma jagooyinka uu madaarku ku fiday.
Dadka ku nool deegaanka Masallaha lama siinnin lacagta saxaafadda laga sheego, waxa la siiyayna waa wax ka yar $250,000. Waxa aanu ka xunnahay in sifo kale loo adeegsaday lacagtii miisaanayadda loogu daray dadka dhulkooda lagu kordhiyay madaarka. Taasna waxa caddayn u ah in Wasiir Maxamuud Xaashi Cabdi uu si toos noogu yidhi “Way jirtay in aanu dhabarka idiin sii jeedinnay. Lacag dhan saddex milyan oo doollar iyo dheeraad oo idinka la idiin qorsheeyay, waxa aanu gelinnay gaashaan-dhigga. Waxa aanu ciidanka qaranka ugu soo iibinnay 150 gaadhi oo kuwa dagaalka ah. In aad na sugtaan oo aanu ciidanka qaranka dhisno ayaa na la qurux badnaatay”.
Dawladda Hoose ee Hargeysa waa ay diidday in dhul-beddel dadkan loo sameeyo, waayo waxa aan lagala tashan dhulkii ay qaybsadeen saraakiisha dawladda, xildhibaannada, ciidanka iyo guddiyadu ee xerada Gaasomta u dhawaa. Waxa dhul sharci leh lagu wareejiyay dad gaar ah.
La soco qaybta shanaad insha Allah..
886 Active Vistors Online